Iyo itsva iPad ye2021 yeiyo Q1 uye ine mini-LED skrini | IPhone nhau
Zvinotaridza kuti nyowani uye inotarisirwa iPad Pro gore rinouya ichaunza akawanda akakosha shanduko achienzaniswa neshanduro yapfuura uye mune iyi kesi ivo vaizove iri yekutanga iPad kukwirisa iyi mhando ye mini-LED mapaneru maererano neDigiTimes media. Pamusoro peizvi, iyo nyowani iPad Pro ye2021 iyo yaizove ne12,9-inch screen yaizotangwa mumwedzi mitatu yekutanga yegore saka mwedzi waMarch unotimirira isu zvizere zvizere nenhau kana ichi chiri chokwadi.
12,9-inch iPad yeQ2021 XNUMX
Mukutaura, iyo webhusaiti ye MacRumors inova ndiyo inoshuma kubatana kwakananga neDigiTimes, inovimbisa kuti kuvhurwa kweiyi nyowani iPad Pro kwakarongerwa kwemwedzi mitatu yekutanga yegore uye nekudaro zvinonyanya kuitika kuti tichava neiyi nyowani 12,9-inch iPad Pro inowanikwa nekukurumidza kunonoka sei.
Iyo 12,9-inch iPad Pro yaisazouya yega neiyi mini-LED skrini, zvinoita sekunge iyo MacBook Pro iyo zvakare yatove kukwirisa nyowani Apple M1 mapurosesa ichatangawo kuwedzera iyi mhando yemasikirini uye nekudaro zvirevo zveMing-Chi Kuo yaizounganidza simba. Ngazvive sezvazvingaite, gore rino 2020 rave shanduko muApple mune zvakawanda zvinhu uye zvinotarisirwa kuti 2021 ichave yakangofanana zvakafanana. Kuona iyi yerunyerekupe munhu atotoda kuona kuti ndeapi mashoko avanotiunzira muCupertino, isu tichafanirwa kuve nemurwere kusvika mwedzi waMarch asi zvechokwadi kuburitsa kuri kufambira mberi zvimwe zvinhu saka isu tichava teerera kwavari.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPad » iPad Pro » Iyo itsva iPad ye2021 yeiyo Q1 uye ine mini-LED skrini